Masar: Siisi oo ka guuleystay Sabaaxi – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Masar: Siisi oo ka guuleystay Sabaaxi
Qaahira – Mareeg.com: Natiijo horudhac ah oo kazoo baxday tirinta codadka tartanka madaxtinimada dalka Masar ayaa sheegaya in wasiirkii hore ee gaashaandhiga Cabdi-fataax Al-siisi uu ka guuleystay siyaasiga la tartamayey ee Xamdiin Sabaaxi.
Natiijo aan kama dambeys aheyn ayaa muujinyesa in 90% Cabdi-fataax Alsiisi uu ku guulleystay kursiga madaxweynaha Masar, kaasoo dadka u codeeyey ay aad uga yaraayeen intii la filayey.
Waxaa codkooda dhiibtay in ka badan 25 Milyan oo Masaari ah, taasoo u dhiganta 45%, waxaana Cabdi-fataax Alsiisi u codeeyey 23,381,262 qof oo u dhiganta 92.8%, halka Xamdiin Sabaaxi ay u codeeyeen 735,194 qof oo u dhiganta 2.92%, waxaana codadka xumaaday noqdeen ilaa 1078,0000 cod.
Kaalinta 1-aad waxaa galay Cabdi-fataax Al-siisi, kaalinta 2-aad waxaa galay codadka xumaaday, halka kaalinta 3-aad uu galay musharraxa Xamdiin Sabaaxi.
Taagreerayaasha Al-siisi ayaa bilaabay iney dabaaldegaan iyadoo aan weli lagu dhawaaqin natiijada rasmiga ah.
Doorashada madaxtinimo ee ka dhacay dalka Masar 3-dii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa waxaa qaadacay axsaabta Islaamiga ah iyo qaar ka mid ah uruurada dhallinyarada, taasoo keentay in dadka codkooda dhiibtay ay aad u yaraadaan.